Maxaa Ku Soo Kordhay: Chelsea Iyo Wararkeeda Suuqa Kala Iibsiga Ee January
HomeHoryaalka IngiriiskaMaxaa Ku Soo Kordhay: Chelsea iyo Wararkeeda Suuqa kala iibsiga ee January
January 12, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Maxaa ku soo kordhay, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Mar kale ku soo dhawaada Warbixinta Maxaa ku soo kordhay oo aan maalin walbo ku soo qaadano mid kamid ah Kooxaha ugu weyn Kubada Cagta iyo Wararkeeda Suuqa waxaa kaloo ku soo qaadanaa wararka kale ee Kooxdaaasi laga qoray.
Maxaa ku so kordhay Chelsea
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay daafaca dhexe ee RB Leipzig Dayot Upamecano keento Stamford Bridge inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
22 jirkan ayaa si xoogan loola xiriirinayay kooxaha Liverpool iyo Man United sanadkii hore laakiin waxa uu heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Bundesliga dhamaadka bishii July.
Qandaraaska ciyaaryahanka reer France ayaa loo maleynayaa inuu ku jiro qandaraas lagu burburin karo 40 milyan ginni, inkastoo agaasimaha Leipzig Oliver Mintzlaff uu dhawaan sheegay in daafaca bixi karo
Aston Villa ayaa lagu soo waramayaa inay ku qasbanaan laheyd inay bixiso lacag aad u badan si ay ula soo saxiixato heshiiska amaada ee Ross Barkley ugu badasho mid joogta ah.
Ciyaaryahankii hore ee Everton ayaa amaah ugu soo biiray Villa , waxaana uu wacdaro ka dhigay kooxda West Midlands ka hor inta uusan dhaawac soo gaarin bishii November.
Ka dib bilowgiisii ​​wacnaa ee nolosha Dean Smith ee ku raad jooga Yurub, wararka xanta ah ee heshiiska joogtada ah ee 27 jirka ah ee Villa Park ayaa bilaabay inay soo baxaan ka dib waqti aad u xun oo ilaa iyo haatan Chelsea ah.
Daafaca dhexe ee Chelsea Fikayo Tomori ayaa lagu soo waramayaa inuu dalbaday inuu amaah kaga tago Stamford Bridge bisha Janaayo.
23 jirkaan ayaa kaliya seddex kulan u saftay Blues intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2020-21, halka uu ciyyaray 44 daqiiqo ee horyaalka ah.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham United Declan Rice ayaa lagu soo waramayaa inuusan xiiseyneynin inuu ku biiro Manchester United .
Xiddiga reer England ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay Hammers intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo u saftay 18 kulan tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan daqiiqad kasta oo xilli ciyaareedkiisii ​​Premier League ee kooxdiisa.
United, oo ay weheliso Chelsea , ayaa loo maleynayaa inay xiiseynayaan saxiixa 21 jirkaan mustaqbalka dhow, iyadoo tababaraha Red Devils Ole Gunnar Solskjaer uu sheegay inuu yahay mid la dhacsan .
Werner iyo Kai Havertz
Frank Lampard ayaa difaacay Timo Werner iyo Kai Havertz ka dib markii labada ciyaaryahan ay shabaqa soo taabteen Morecambe – isagoo isbarbar dhigay halyeeyga Chelsea Eden Hazard.
Saxiixyada xagaaga ee Werner iyo Havertz ayaa dhawaanahan dhibtoonayay laakiin labada ciyaaryahanba waxay shabaqa soo taabteen kulankii ay 4-0 kaga badiyeen FA Cup Axadii.
Maxaa ku soo kordhay kala soco Xaalada Kooxdaada Fadlan Commentiga noogu reeb kooxda xigta aan ka hadleeno